साहिँली औंला हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ तपाईको भाग्य कस्तो ? – Jagaran Nepal
साहिँली औंला हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ तपाईको भाग्य कस्तो ?
काठमाडौँ । हस्तरेखा तथा जन्म मितिका आधारमा भविष्यफल हेरिँदै आइएको छ । हामी धेरथोर त्यसमा विश्वास पनि गर्छौं । यदि यी कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ भने अर्को एक तथ्यसमेत फेला परेको छ । मनुष्यको हातको साहिँली औंलाको आकारले व्यक्तिको स्वभाव बताउन सक्ने कुरा पत्ता लागेको हो ।
१० यदि तपाईंका हातको साहिँली औंला, चोरी औंलाभन्दा ठूलो छ भने तपाईं जोखिमसंग खेल्न मन पराउने स्वभावको हुनुहुन्छ । तपाईंको ब्यक्तित्व आर्कषक र सुमधुर हुन्छ । तपाईंलाई सहजै मानिसहरुले मन पराउँछन् । तर कुनैकुनै बेला तपाई आक्रमक हुने हुँदा आफैलाई त्यसले असर गर्न सक्छ । तपाईं आफ्ना सहकर्मीको तुलनामा धेरै धन कमाउनुहुन्छ ।
२० यदि तपाईंको हातको साहिँली औंला, चोरी औंलाभन्दा सानो अर्थात छोटो छ भने तपाईं एक्लै बस्न मन पराउने स्वभावको हुनुहुन्छ । यसको असर तपाई‌ंको प्रेम जीवनमा समेत पर्दछ, मन परेको मानिसलाई भन्न नसक्नु तपाईंको ठूलो कमजोरी हुन्छ । तपाईं आत्मकेन्द्रीत भएकाले आफू एक्लैमा रमाउनु हुन्छ । तपाईंलाई अरुले बोलाएको ठाउँ वा भिडमा जान मन पर्दैन ।
३० यदि तपाईंको हातको साहिँली औंला, चोरी औंला बराबर छ भने तपाईंहरु शान्ति प्रिय हुनुहुन्छ । तपाईं आफू शान्त बस्न रुचाउँनु हुन्छ । तपाईंको स्वभाव राम्रो हुने भएकाले दुई पक्ष्ँबीचको मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा तपाईं विश्वास पात्र हुनुहुन्छ । आफ्नो साथीलाई समेत तपाईं अत्यन्त प्रेम गर्ने स्वभावको हुनुहुन्छ । साथै भावनात्मक रूपमा स्थिर रहने भएकाले तपाईं हत्तपत्त प्रतिक्रिया जनाउनु हुन्न ।